२९ औं त्रिवेणी कपको उपाधि बुद्धलाई – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun २९ औं त्रिवेणी कपको उपाधि बुद्धलाई – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
२९ औं त्रिवेणी कपको उपाधि बुद्धलाई
२१ पुष २०७८, बुधबार २०:०४
लमजुङ : बुद्ध युवा क्लब आँबुखैरेनी २९ औं त्रिवेणी कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरस्थित सहजी खेल मैदानमा बुधबार भएको फाइनलमा भगवती क्लबलाई २–० ले हराउँदै बुद्ध च्याम्पियन बनेको हो ।
बुद्धलाई च्याम्पियन बनाउन सन्दीप राना मगर र राम्से यान्निकले एक एक गोल गरे ।
खेलको १३ औं मिनेटमा सन्दीपले गोल गर्दै बुद्धलाई सुरुआती अग्रता दिलाएका थिए ।
त्यसपछि १५ औं मिनेटमा यान्निकले गोल गर्दै बुद्धलाई २–० को जित दिलाए । उपाधिसँगै बुद्धले ५ लाख नगद प्राप्त गरेको छ । उपविजेता भगवतीले ३ लाख प्राप्त गरेको छ ।
यस अघि बुद्धले दोस्रो सेमिफाइनलमा समाज कल्याणलाई ३–० ले हराएको थियो । यस्तै पहिलो सेमिफाइनलमा भगवतीले त्रिवेणी युवा क्लबलाई ३–० ले हराएको थियो । प्रतियोगितामा १८ टोलीको सहभागिता रहेको थियो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २१ पुष २०७८, बुधबार २०:०४ 37 Viewed